Mamaneja eAmerica Akashatiswa ... | Martech Zone
MaAmerican mamaneja Akashatiswa…
China, Gumiguru 20, 2005 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
MaAmerican Mamaneja Akaparadzwa. Dzimwe dzinotova brats.
Fungidzira kutarisira pachitsuwa. Chitsuwa chako chine vanhu vashoma, maawa aive kure nechinhu uye iwe wakataura mumwe mutauro. Kukwezva vashandi kuchitsuwa chako kwakaoma nekuda kwerurimi rwekuzvarwa uye chitsuwa. Chitsuwa hachisi mumabvazuva kana maCaribbean, kuri kutonhora uye kunyorova nemamwe mwedzi kungopa maawa ezuva. Kukura, vashandi vako vakadzidziswa kutaura mimwe mitauro miviri sezvo mutauro wako usinganyatso kuzivikanwa kunze kwechitsuwa chako.
Sa maneja uye nhengo yechitsuwa, ibasa rako kufambisa vashandi vako munzvimbo dzavanogona kubudirira. Iwe unofanirwa kushanda nesimba kuchengetedza vashandi; nekuti, kunyangwe iri imba yavo, vanogona kubva pachitsuwa pese pavanenge vachida kutsvaga mimwe mikana. Iwe unofanirwa kuisa mari yakawanda muvashandi vako zvese muhoro uye zviwanikwa. Mumwe mushandi anotanga nemavhiki mashanu ezororo pagore. Iwe unogona kusakwanisa kusimudzira vanhu nekukasira nekuti mushandi mutero uye chigumbu zvinogona kuviga bhizinesi rako.
Chitsuwa ichi iIceland. Guta iri Reykjavik. Inyika inonakidza. Vanhu vayo vakapfuma mutsika, nhoroondo, uye vane imwe yeane hutano uye akapfuma mutsika pasirese. Kubata uye kushanya ndiwo maindasitiri epamusoro muIceland. Ivo vane yakanakisa hove dzegungwa pasirese. Chitsuwa ichi chakazara mune zvinonakidza zvejeniki maficha kubva kumazaya echando, magiza, kusvika kuminda yemabota.
Kambani yangu yakanditumira kuIceland vhiki ino kuti ndibatsire mumwe wevatengi vedu. Kubva panguva yatakamhara, takanga tichitya. Tsika yesangano, hunyanzvi uye kuzvipira kwevashandi kwanga kwakatosiyana nekambani yeAmerica yandakamboshanda nayo. Chokwadi ndechekuti, ndinofunga isu takaparadzwa.
MuAmerica, kana iwe usingafarire mushandi wako unogona kungovadzinga basa, kuvakumbira kuti vaende, kana kuita kuti zvisagadzikana zvakakwana kuti vaende. Kana dzikasabereka, haufanire kushandisa zviwanikwa kuti uwane imwe nyowani. Kubudirira kwedu murudzi urwu kunozivikanwa pasi rese asi hazvisi nekuda kwemaneja edu makuru. Imhaka yesimba hombe revanhu ratinaro. Zvinoreva kuti isu hatifanire kubata. Hatidi kutungamira. Isu hatitarise kureba kwekambani sechinhu kazhinji kacho nguva yakareba iyo mushandi ave nekambani; tinovavarira nekuda kwekusakwana kwavo.
Mutengi watakashanyira ibhizimusi rinobatsira muindasitiri yepasi rese iri kutenderera pese pese. Vanosangana nematambudziko akawanda kutipfuura. Muchokwadi, ivo vanokwikwidza munyika medu vanogona kubhuroka sechikamu chehurongwa hwebhizinesi ravo! Ivo vano tarisa pahunhu, nepo vakwikwidzi vavo vachitarisa pamutengo. Ivo vane kwenguva yakareba marongero, nepo vakwikwidzi vavo vari kunetsekana nemutengo wanhasi wemasheya. Hupenyu hwavo hunoda izvozvo, uye vanonunura.
Munzvimbo dzese, tsika yavo uye kushupika kwenzvimbo yavo zvinoda kuti vave vashambadzi vari nani, vanhu vebhizinesi varinani, uye kupfuura zvese, maneja ari nani. Patakagara mumisangano yedu nevazhinji vashandi, hatina kukwanisa kuziva kuti ndevapi vari kumberi uye vaive vakuru vakuru - vese vaive neruzivo, vakazvipira, vachitaura uye vachiita.
Mubasa rangu, ndakasangana nevatungamiriri 1 kana vaviri vanogona kuzokwikwidza munzvimbo ino. Zvinosuruvarisa, zviuru zvevamwe vandakashanda navo havana kenduru. Kutaura chokwadi, ndinofunga ndiri mumwe wekupedzisira…. Handina chokwadi chekuti ndinogona kubudirira ipapo futi.
Mamaneja edu akaparara. Ivo havafanirwe kubata, ivo havafanirwe kuchinjika kune kwavo nharaunda ivo vanongo shandura nharaunda kuti vafukidze kusakwanisa kwavo kutungamira. Mune mamwe mabhizinesi, kuwanikwa kwevashandi kunotobatsira nekuti kunogona kuramba kuchibhadhara. Vamwe vanofunga kuti zvakachipa kuwana mushandi mutsva pane kuchengeta ane ruzivo.
Nathan Myhrvold, aimbova Chief Scientist, kuMicrosoft akati, "Vagadziri vepamusorosoro vanogadzira kupfuura vashandisi vema software kwete nechinhu che10X kana 100X, kana kunyange 1,000X, asi 10,000X.â ??? Ndine chokwadi chekuti chirevo ichi chinogona kudzokororwa mumasangano mazhinji. Icho chokwadi ndechekuti - yakanaka yekushandira haina kukosha zvimwe kupfuura vamwe vashandi, ivo vanokosha exponentially zvimwe.
Sezvo nyika yedu ichiramba ichibatana, chitsuwa chedu chiri kuderera. America parizvino yave kuva mutengi pamusika wepasirese uye hatisi kuzobudirira kunze kwekunge taisa maneja edu kuzvidavirira. Izvo zvinoda kuti Iceland iite haisi kure zvakanyanya mune ramangwana renyika yedu. Vashandi vedu vakanaka uye mamaneja vanozotorwa nemakambani anokoshesa kukosha kwavo. Mamaneja akashata achatasva makambani avo akaipa kuenda muvhu.
Tags: Americazvepasi roseupfumi hwepasi poseAisirendipasi roseutaririmenejanyika
Blogs Kuchenesa Up